Jose Mourinho Oo U Xanaaqsan Maamulka Sare Ee Kooxda Man United & Sababta Oo La Ogaaday – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Wararka Maanta Jose Mourinho Oo U Xanaaqsan Maamulka Sare Ee Kooxda Man United & Sababta Oo La Ogaaday
Jose Mourinho Oo U Xanaaqsan Maamulka Sare Ee Kooxda Man United & Sababta Oo La Ogaaday
Tababaraha Kooxda Man United ayaa ku xanaaqsan maamulka sare ee kooxdiisa iyada oo ay sabab u tahay xiddigaha heshiisyada cusub laga saxiixayo.
Wakiilada xiddigaha Anthony Martial & Marcos Rojo ayaa wadahadalo la qaatay man United bishii December laakiin waxa ay wali sugayaan in ay kooxdu heshiis cusub u so bandhigto xiddigaha in ka badan laba bilood.
Heshiisyada labada xiddig ayaa dhici doona dhamaadka xilli ciyaareedka dambe inkasta oo ay Man United haysato heshiis dookh ah oo ah sano ah hadana arintaas ayaa wel-wel ku haysa jose Mourinho.
Juan Mata, Ander Herrera, Luke Shaw, Ashley Young and Daley Blind ayaa sidoo kale wajahay mustaqbal aan la ogayn kadib markii ay Man United dhaqan galisay heshiisyadii halka sano ahaa ee dookha ahaa waxana uu heshiiskoodu dhacaya 2019 iyada oo aan ilaa haatan heshiisyo cusub laga saxiixin.
Fashilka ay kooxdu ku fashilantay in ay wakhti hore heshiis cusub ka saxiixato Marouane Fellaini ayaa keentay in uu xiddigu diido in uu haatan heshiis cusub u saxiixo xilli uu haatan si xor ah uga tagi doono kooxda xagaaga.
Mourinho ayaa ka wel-welsan in ay xaaladaasi dhibaato ku keento saamayna ku yeelato xiddigaha kushaharka badan ka qaata kooxda ee Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, Romelu Lukaku iyo Alexis Sanchez.
Martial iyo Rojo ayay labadooduba kooxda ka qaataan lacag dhan 70 kun oo Gini todobaadkii waxana ay dalbadeen in kor loogu qaado mushaharkooda.
Taas oo wel-wel ku abuurtay jose Mourinho sababna u ah in uu so Jose Mourinho si weyn ugu xanaaqsan yahay maamulka sare ee kooxda.